German manufacturer targets Zim investment | The ManicaPost
18 May, 2018 - 00:05	 2018-05-17T21:42:02+00:00 2018-05-18T00:04:46+00:00 0 Views
Project manager for Liebherr Rail Africa Dubre Muller (left), who is based in South Africa meets with Minister for Manicaland Province Cde Monica Mutsvangwa (centre) while Headlands development committee chairman Mr Elias Masuku looks on. Picture by Tinai Nyadzayo
The company’s division’s project manager, Ms Dubre Muller, who visited the Minister of State for Provincial Affairs, Monica Mutsvangwa this week said the company had plans to headquarter its African rail division, Liebherr Rail Africa in Zimbabwe.
“The Liebherr Company wants to establish a rail division in Africa, specifically a division in the SADC region and I have chosen that they invest and headquarter the division in Zimbabwe. Obviously because I am a Zimbabwean and because of the Zimbabwe is open for business mantra,” said Ms Muller.
“We are here to drum up support for investment in Manicaland because Manicaland is our home and to show the investors that Zimbabwe is better than anywhere else when it comes to tourism and investment,” said Mr Masuku.